Thursday January 13, 2022 - 14:03:04 in Wararka by Waaberi News
Siyaasi Maxamed Nuur Carraale Duur ayaa haddalo duur xul ah ku duray Xisbiyadda Mucaaradka ah iyo Beesha uu ka soo jeedo ee Garxajis "Aqalka Madaxtooyadda waxa kaliyaata ee lagu gaadhi karaa waa Cod,Hadalada Deegaankayga ka soo yeedhaana waa laba mid uun, Kalkoo nagu dheeraaday iyo kulaylka oo aanu u dhalanay "Ex Wasiir Duur.
Dhanka kalene Siyaasi Cismaan Cumar Dool ayaa isna si huffan uga falceliyey haddalada ka soo yeedhay siyaasi duur "Siyaasiyan hadii Madaxweyne noqoto Cirro ayaa Faysal uga dhaw kursiga lakiin hadii lays yidhaahdo Muuse Qabiil ahaan ha laysaga celiyo oo ay Cirro iyo Faysal hanjabaan waxaa run u dhaw Faysal Cali Waraabe.”
Mujaahid Cismaan Cumar Dool oo haddalkiisa sii watta ayaa intaas ku darray "Waayo Ciidagale Faysal Cali Waraabe wuu wada raacaya lakiin Cabdiraxmaan Cirro waxa Muuse Biixi uga soo horaynaaya Habar Yoonis. Waa runtiisa Faysal wuu karaa in uu Muuse Biixi ka dhigo Nin Reer Samatar ah eeg ka waxaa ku hadlaaya waa Muuse Cabdalle waa Duur 4 sano ayuu Muuse ku dul wareegaya isaga ayuu kalku ku dheeraday. Markii uu Muuse Biixi shaanida turaayaye ee uu hanjabaayay maxaa ku dheeraa bal soo waydiiya!!!”